गोरखापत्र – मझेरी डट कम
विकृतीको रुपमा मौलाउँदैछन् ‘भ्यालेन्टाइन डे’ अर्थात् प्रेम दिवस
प्रेम दिवस अर्थात् ‘भ्यालेन्टाइन डे’ हरेक वर्ष १४ फेब्रुअरीका दिन मनाइने गरिन्छ । युवा-युवतीले एकआपसमा प्रेम प्रकट गर्ने दिन, आफुले मन पराएको केटा वा केटीलाई प्रेम प्रस्ताव राख्ने दिन । आफ्नो प्रेम र प्रस्तावप्रति विश्वस्त हुनुहुन्छ भने तपाईंको लागि उपयुक्त दिन १४ फेब्रुअरी हुन सक्छ ।
प्लुक्क दैलोमा आइपुग्यो नयाँ वर्ष। गएको साल केही गर्न नसकेको भए पनि निर्लज्ज आइपुग्छ यो। जतिसुकै सत्तोसराप गरे पनि यसमा केही सामथ्र्य त छ- यो आइपुगेको देख्ता बाल, वृद्धवृद्धा सबैका अनुहारमा एउटा ज्योति धिपिक्क बल्छ। नयाँ वर्षमा खुसी हुनुपर्छ। बाबाआमाले यही सिकाउनुभएथ्यो। सिकेकै भन्नुपर्छ।
छतमा उभिएकी म कसको प्रतीक्षामा छु ? आज चैतको १५ गते। आधा बित्यो अब अलिकति धूलो उडाउँदै बाँकी आधा पनि बित्ने नै छ। ऊ गएको ठीक एक महिना बित्यो। म मेरो लोग्नेको प्रतीक्षामा छु, अथवा नव वर्षको अर्थात् वैशाख १ गतेको। किनकि ऊ त्यसै दिन आउनेछ ।
ल्होछार-ल्हो माने वर्ग, छार भन्नाले नयाँ वर्ष । तामाङ जातिको सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवनमा ल्होछारको ठुलो महत्त्व रहेकेा छ । यस वर्ष ताक (बाघ) वर्षको विदाई र ह्योई (खरायो) वर्षको स्वागतमा ल्होछार मान्ने तयारीमा गाउँदेखि सहरसम्मका तामाङ समुदाय जुटिरहेका छन् । ल्हो(वर्ग) बाह्रवटा हुन्छन् । अर्थात त्यसलाई ल्होखोर च्युङी भनिन्छ ।
धार्मिक पर्यटनको क्षेत्र दाउन्नेदेवी
नेपालमा प्रशस्तरूपमा धार्मिक पयटकीय स्थानहरू छन् । त्यसमध्येको दाउन्ने देवीको आफ्नै महिमा र पहिचान छ । नवलपरासी जिल्लाको दुम्कीबास र बर्दघाटको बीचमा पहाड रहेको छ । यही पहाडी भागलाई दाउन्ने डाँडा भनिन्छ । यो ठाउँ बाइसे चौबिसे राज्य हुँदा पाल्पा राज्यमा पर्दथ्यो । हालका माकर, दुम्कीबास, वेलिवेनीपुर तमासपुर गाविस तत्काल मङ्गलपुर गाविसमा पर्दथे ।
रचना फिर्ता गर्नुपर्दा …
मैले काम गर्ने संस्था राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले ‘उपहार’ नामको त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशन गर्ने रहेछ । त्यो पत्रिका बाहिर बजारमा नआउने भएकाले खासै पाठकहरूले भेउ पाएका थिएनन् । सुरूमा यस पत्रिकाभित्र कर्मचारीको तालिम सरुवा बढुवा र कर्मचारीहरूका केही आर्थिक लेख, रचना र सामान्य साहित्यिक रचनाहरू छापिने गरेका रहेछन् र साहित्यिक क्षेत्रमा त्यस पत्रिकाको खासै नाम चलेको रहेनछ ।
सुरेन्द्र के. सी.
सन्दर्भ फेरि घुमेर सहिद दिवस आइपुगेको छ । नेपाल सरकार प्रत्येक वर्ष माघ १६ लाई ‘सहिद दिवस’ का रूपमा धुमधामसँग स्मरण गर्ने गर्छ । यो लेख सरकारको उक्त दिवस मनाउने पृष्ठभूमि र कारण होइन, सहिदको अर्थ, मर्म र अभ्यासमाथि थोरै प्रकाश पार्ने हेतु लक्ष्यित छ ।
रमेश विकल साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित ‘रमेश विकलः बिम्ब एक प्रतिबिम्ब अनेक’ नामक समालोचना ग्रन्थमा उनका जीवनीलाई प्रश्रय दिने समग्र साहित्य र जीवनवृतिसँग सम्बन्धित समालोचनाहरूलाई समावेश गरी उनका योगदानलाई आधार मानेर समालोचनात्मक लेखहरूको क्रम निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै अचम्म भइरहोस् !
एकाबिहानै टेलिफोनमा घण्टी बज्यो । फोन उठाएँ ।
उताबाटभन्यो – ‘तपाईं देवीको को हो ?’
बौद्धमार्गीका लागि काँक्रेबिहारलाई बौद्ध बिहार हो भने हिन्दुहरूका लागि हिन्दु मन्दिर । मान्यता वा धारणा बेग्लाबेग्लै भए पनि नेपालको इतिहासमा काँक्रेबिहार एउटा पुरातात्विक महत्त्वको थलो रहेकोमा विवाद छैन ।
उहाँको त सुर हरायो, हाम्रो नि !
फणिन्द्रराज खेताला यतिखेर मान्छे चिन्नु हुन्न, पहिले उहाँलाई धेरै मान्छेले चिनेनन्, अहिले उहाँ कोही पनि चिन्नुहुन्न, आफ्नै परिवार पनि । फरक यति हो सुर हराएपछि उहाँले अरूलाई चिन्न छाड्नुभयो, अरूले सुर नहराउँदा पनि उहाँलाई चिन्न सकेनन् । कुरो उही हो, हामी समयमै मान्छे चिन्न सक्दैनौँ, चिने पनि बूढो भएपछि, अस्पताल पुर्‍याएपछि, पशुपति लगेपछि मात्र मान्छे चिन्छौँ हामी । मान्छेका नाममा भीड जम्मा भएपछि सही मान्छे चिन्न नै कहाँ सकिन्छ र ?
थारू जातिको नयाँवर्ष ‘माघी’
“सखिये हो ! माघीक् पिली गुरी जाँर …” (साथीहरू हो ! माघीमा पियौँ गुलियो जाँड) अधिकांश नेपालीको मुखमा झुण्डिएको यो थारू गीतको एक हरफले थारूको पहिचान झल्काउँछ । एकापसमा रमाइलो गर्ने, साथीभाइबीच प्रेम तथा आदरसम्मान गर्न सिकाउने ‘माघी’ पर्व थारू जातिको नयाँ वर्ष हो ।
टोकियो जापानको राजधानी बाहृय संस्कृति अछुतो छैन । सम्पन्न सहर आधुनिकतासँगै आफ्नै मौलिक संस्कृति बिर्सिरहेको छ, तथापि औपचारिक कार्यक्रममा पस्कने विनम्रता, विनय तथा सद्भावले जापानको परम्परागत संस्कृतिको झल्को दिन्छ । टोकियो विश्वको महँगो सहर, इलेक्ट्रोनिक र मेसिनहरूको निर्माणका लागि संसारभरि ख्याति कमाएको यो शहर सधैं सधैँ व्यस्त छ ।
श्री राज्य विभाजन ब्रत कथा
कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगत्स्यमुनि ताहाँउप्रान्त शिवजीले दक्षको टाउको काटी सम्पूर्ण यज्ञमा उपस्थित तेत्तीसकोटी देवता प्रभृतिलाई तहसनहस पारेर सतीदेवीको लासलाई पिठ्युँमा बोकी सारासंसार भ्रमण गर्न लाग्नुभयो । दक्षप्रजापतिको समर्थकहरूलाई मुला काटे झैँ छप्काउँदै र आफ्ना भक्तजनलाई वरदान पनि दिँदै जानुभयो जहाँ शिवजी पुग्नुहुन्थ्यो ताहाँ ताहाँ एक एक राज्य र दिक्पालसमेत राख्दै जानुभयो ।
मरेर गएपनि बाँचिरहने स्रष्टा विकल
नेपाली साहित्य जगत्का चम्किला ताराको नाम हो रमेश विकल । उनले नेपाली साहित्यको भण्डारमा कथा, उपन्यास, नाटक, बालसाहित्य, ब्यङ्ग्य निबन्ध गरी चार दर्जनभन्दा धेरै कृतिहरू भरेका छन् । उनले विश्वप्रसिद्ध व्यक्तिका पुस्तक तथा रचनाहरू पनि अनुवाद गरेका छन् । उनी सफल लेखक, अनुवादक साथै राम्रा चित्रकार तथा कुशल बाद्यवादक पनि थिए । उनी आफ्नो गाउँठाउँदेखि राष्ट्रियस्तरमै समाजसेवीको रूपमा पनि परिचित थिए ।
व्यक्तिसँगै सकियो एउटा युग
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीमा राखिएको गोविन्द ‘गोठाले’को शव नाटककार ‘गोठाले’को नाटककार व्यक्तित्व सम्झाइरहेको थियो । वरपर प्रायः साधारण मान्छेका घर नदेखिने प्रतिष्ठानको प्राङ्गणमा वल्लो घर, पल्लो घरको झ्यालबाट कमैले मात्र हेरे होलान् । भाषा साहित्यलाई पे्रम गरेर मृत्यु पर्खने उहाँको कथाजस्तै प्रेम र मृत्यु उहाँ एउटा दिएर अर्को लिएर जानुभयो । भुसको आगोजस्तो दिन प्रतिदिन भित्रभित्रै कमजोर हुँदै गएका हामीले दोष कसैको छैन भनेर आत्मसन्तोष गरे मात्र हो । ‘गोठाले’को व्यक्तित्व र उहाँप्रति हामीले गरेको व्यवहार सम्झौं त एकै छिन । एउटा विराट व्यक्तित्व अस्वस्थ भएर १० दिनसम्म अस्पताल भर्ना गरिँदा पत्तोसमेत पाएनौँ हामीले ।
“घर-आँगन सफा छैन, सडक, खेत त मलमुत्र त्याग गर्ने ठाउँ नै भइहाल्यो । जनस्वास्थ्यप्रति अलिकति पनि ध्यान दिन नसकेका गवाँरहरू “सहरमा नआइकन कसैले सभ्यता पनि नसिक्ने भए” तराईको एउटा गाउँबाट फर्किएपछि एनजीओ मास्टरले साथीहरूसँग कुरा गरे तर रिपोर्टमा भने गाउँमा स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना फैलाउन जागरण कार्यक्रम, गोष्ठी, सम्मेलन गर्नुपर्ने र केही अगुवाहरूलाई काठमाडौँको अवलोकन भ्रमण गराउनुपर्ने लेखे ।